Ilhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda - Jigjiga Online
HomeSomalidaIlhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda
Washington (JO) – Warbaahinta reer Galbeedka ayaa si weyn u hadal haya sheeko ku saabsan in Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka, ay xiriirkii shaqo u jartay shirkadda la talinta dhinaca siyaasadda ee uu leeyahay seygeeda.
Ilhaan, oo dhawaan mar kale ku guuleysatay xubinnimada Golaha Congress-ka ee ay ku matasho gobolka ay Soomaalida ku badan yihiin ee Minnesota, ayaa Axaddii ku dhawaaqday go’aanka ay xiriirka dhaqaale ugu jartay shirkadda E Street Group, oo uu leeyahay seygeeda Tim Mynett, sida ay wargeysyo kala duwan xuseen.
Email ay Ilhaan Cumar u dirtay taageerayasheeda ayaa erayada ku qoran waxaa ka mid ahaa: “Waxaan go’aansannay inaan baabi’inno qandaraaskii aan kula jirtay shirkadda Tim iyo Will. Halka taageerayaal badan oo aan isu dhownahay, si fiicanna u yaqaanna labadaas ay soo jeedinayaan inaan la sii wadno wada shaqeynta – Anigu waxaan doonayaa inaan qof walba oo taageersan ololaheenna, waqti iyo dhaqaalena ku bixiya u xaqiijiyo inaysan jirin cillad ku jirta taageeradaas.”
Email-ka ay Ilhaan u dirtay taageerayaasheeda ayey ku sheegtay in aysan goor hore xiriirka u jarin shirkadda ninkeeda, maadaa ay isticmaashay dhaqaalaheedii, siyaasiyiintii kula tartamayay doorashada guudna ay isu baheysteen.
Hase ahaatee Guddiga Doorashada ee Federaalka wax tallaabo ah kama uusan qaadin.
Waa kuma Tim Mynett?